7043, Bangkok, Bangkok (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > บริการถ่ายภาพ > 7043
404/82 Soi Ladprow 94, Ladprow Rd.
หาช่างภาพ Ekkasit Chaingam
ZuperEgo Sale ทุกชิ้นอ้อนคัดเองคะ
IFunnyBooth Photobooth for Wedding, Party, Event
Tid-X Studio บริการถ่ายภาพทั่วราชอา
ร้านถ่ายรูปแชมป์ - Champ Photo & Digital
9/277 ศูนย์การค้ารามอินทรา ซอยลาดปลาเค้า78 ถ.รามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เข
Idear Bella Wedding Decoration
Popadu wedding design เช่าbackdrop galleryงานแต่ง
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
Airtel Achievers Club Tour 2015
ชุดออกกำลังกาย by Best Body
Hit the Pillow - ขายชุดนอน
อำเภอเมือง, Chon Buri
Kai Keyboard Mafia
EASY MMR DOTA2
Make Up by Garfield
Siam-DVD.com ขาย DVD ซีรีย์เกาหลี 17 บาท ส
River City Bangkok Room 180-181, 23 Charoen Krung 24, Talad Noi Sampantawong
I am the cause , I am the reason Experiencing the way I am "Who will do anything for own sake"
[07/31/21] အခန်း (၁၁.၅)
အခန်းထဲက ထွက်တော့ မစီမာ က ထမင်းကြော် စားမလား လို့မေးတော့ ကျနော့်ကို American Breakfast ပဲလုပ်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ Nescafé တဇွန်း ၊ သကြား ၂ ဇွန်း ၊ Coffee mate ၂ ဇွန်း နဲ့ဖျော်ပြီး Ovaltine တဇွန်းခပ်ထားတဲ့ အဖြူရောင် ခွက်ဟာ အသင့်ရှိနေတယ်။ မစီမာ ကိုစောင့်ရင်း ဘေးနား က စာအုပ်စင်ပေါ်က ဖတ်လက်စ စာအုပ်တွေထဲက တအုပ် ကိုဆွဲယူလိုက်တော့ ၊ George Orwell 1984 ဖြစ်နေတယ် ၊ မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေလို့ Bookmark လေးကနေပြန်လှန်လှောမှ ကိုယ်ဖတ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ နေရာကနေ အရှိန်နည်းနည်း ပြန်ရတယ်။
၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ မစီမာ က မနက်စာ လာချပေးတော့ ပန်းကန်ထဲက scramble egg တွေက ပျော့အိနေစွာ နှင့် ခက်ရင်း နှင့် တူးဆွမှာကို ကြိုလင့်နေသယောင်။ ဘာနှင့်တူလဲ ဆိုတော့ တခါမှ ယောင်္ကျား နှင့် မအိပ်ရသေးဘူးလို့ ပြောပြီး အပျိုဟန်ဆောင်မ တွေဟာ ယောင်္ကျား တွေနှင့် ကုတ်ကမြင်း ထနေဖို့ အသင့်ဖြစ်နေသလိုနှင့်တူတယ် လို့ သူ့စိတ်ထဲကတွေးမိတယ်။
မစီမာ က သူရှေ့မှာ ဆား၊ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၊ Saracha ငရုတ်ဆီ နှင့် နာနတ်ယို ခွက်တွေ ကို အလျားလိုက်တန်း​နေအောင်သေချာချပေးသွားရင်း “ပြည့်ဖြိုး ဘာလိုသေးလဲ လို့မေးတော့” စိုင်းပြည့် ဆီကိုဖုန်းဆက်ပေးပြီး ညနေ အိမ်လာခဲ့ဖို့ပြောပေးပါလို့ပဲ ပြောရင်း ဆက်စားနေလိုက်တယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ” လို့ပြန်ပြောတာကို ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပဲ လက်တဖက် က ပန်းကန်ရှေ့က ဆား၊ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၊ Saracha ငရုတ်ဆီ နှင့် နာနတ်ယို ခွက်တွေ ကို သေချာ စီစီရီရီ ထပ်တန်းနေအောင်ထပ်လုပ်လိုက်တယ်။
[03/08/21] ၃ တောင်ဝတ် ထမီ
(အခုခေတ်မှာ ၄ တောင် တမိုက်လျော့)
တကယ်တော့လည်း ဘုန်းရှိသည် မရှိသည် ကို ကျနော်တို့မသိနိုင်ပါ။
ဘုန်းဆိုသည်မှာ အယူသည်း တို့၏ ကံအနိမ့်မြင့်ကို တိုင်းတာသည့် ပေတံ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ခွဲမွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ၊ အရမ်းကြီးတွေ divine intervention တွေပါမနေခဲ့ပါဘူး ၊ မယ်တော် က မတ်တပ်ရပ်လျက် နှင့် ဖွားမြင်တော်မှုတယ် ပြောပါတယ်။ အဲ့နည်းဟာ လည်း ရှေးက တကယ်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ divine ဖြစ်ချင်း မဖြစ်ချင်းထက် ဘုန်းလက်ရုံးဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရာပါ အရည်အချင်း ၊ ပါရမီ နှင့် ကံ တို့နှင့်ပဲသတ်ဆိုင်ပါတယ်။ မွေးရာပါ အရည်ချင်းကလည်း မရှိ ၊ ပါရမီ ကလည်း မပါ၊ ကံကတော့ ကောင်းနေခဲ့ရင်တော့ လည်း တမျိုးတမည်ပေါ့လေ။ ကံကံ၏ အကျိုးတရားဟာ အတော်ကို နက်နဲလှပါတယ် ။ အထုံပါရမီ နှင့် ကံ ဟာအတော်ကိုကွဲပြားပါတယ်။ (နောက်အချိန်ရရင်ရေးမယ်စိတ်ကူးပါတယ်)
ကျနော် စိတ်အတော်ကျနေခဲ့တုန်းက ကောင်းတာလုပ်တိုင်း ကောင်းတာဖြစ်မလာတဲ့ ဘာသာကိုမယုံတော့ဘူးဆိုပြီး ဘာသာမဲ့ လုပ်မယ် စဉ်းစားရင်း တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ရွှေတိဂုံ မှာ ဘုန်းကြီးတပါး နှင့် တိုးမိပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာက အဲ့နေ့က ဘုရားနောက်ဆုံးတက်ခြင်းအနေ နှင့် သွားတာပါ ။ အဲ့ဒီ ဘုန်းဘုန်း က အရင် က ဝက်သတ်သမားပါ ၊ သူ့ရဲ့ ကုသိုလ်ကံတရားက အားကောင်းခဲ့တော့ အခု သူသိက္ခာတော် အတော်ရပြီးပါပြီ ။ ကျနော် နှင့် တိုးမိတော့ ထူးဆန်းစွာ နှင့်ပဲ ကံကံ၏ အကျိုးတရား နှင့် “အဟောင်းစား” ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သီအိုရီတခု လေ့လာခဲ့ရပါတယ် ။
အဟောင်းစား ဆိုတာကတော့ အကြမ်းဖျင်း အားဆိုရင် ရှေးဘဝ အဆက်ဆက် က ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ ပါရမီ နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကံ (ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်) ကိုဆိုလိုတာပါ။ ငွေတွေစုခဲ့သလိုပဲ ကျနော်တို့ ဟာ ဘဝ ပေါင်းများစွာက ထို ကံ တွေကို ပြုလုပ် ၊စုစည်းခဲ့ရတာပါ ။ အဲ့အစုအထုပ်ကြီးတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ ယနေ့
အချိန်မှာ လာပြီး အကျိုးဆက်အနေနှင့် ခံစားနေရတာပါပဲ။
ခံစားရတဲ့ အကျိုးဆက်ချင်းဟာ မတူပေမယ့်
ကျနော်တို့ဟာ မျက်မှောက် မှာပြုမှုနေထိုင်မှု နှင့် ယှဉ်တွဲပြီး ရလဒ် အနေနဲ့ ကုသိုလ် ၊ အကုသိုလ် အသစ်တွေ ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဘယ်သူမှ လာပြီးပြုတာမဟုတ်ပေမယ့် မိမိ ပြုခဲ့ရတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပါပဲ။ “ပုရိမာ” ဆိုတဲ့ ရှေးဘဝ အဆက်ဆက်က ကောင်းမှု ကုသိုလ် အားနည်းခဲ့တော့ ဒီဘဝ မှာ ဟိုဟာဆိုလည်း ယုံရ ဒီဟာဆိုလည်း ယုံရ နှင့် ရှင်သန်နေရတာပါပဲ။
ငါ့ဘဝ ဆိုးရွားလိုက်တာ ၊ ငါပဲ ခံနေရတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကိုပြုမှုနေတဲ့ သူကိုကြည့်ရင်သူက အသစ်တွေယူနေတာပါ ၊ကိုယ်က အဟောင်းတွေဆပ်ပေးနေရတာပါ လို့မှတ်ယူနိင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကုသိုလ် အသစ် တွေထဲမှာ ကိုယ့်အတိုး အဆစ်မပါအောင်ကတော့ ကိုယ်ပဲလိမ္မာပါးနပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဝါဒ ဟာပျော့ညံ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ ရဲရင့်ခြင်း နှင့် ပညာဉာဏ်ကြီးမားခြင်းပါ။ အဲ့တော့ ဘာမှဟုတ်တဲ့ အယူသည်းမှုတွေ နှင့် ဘဝ ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ တချို့အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် နှမျောစရာတွေပါ။
အဲ့တော့ ဘုန်းလက်ရုံးကြီးလှပါပြီဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားကြီးတွေက ထမီ ကို ကံ နိမ့်မှာဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် ထိရတို့ရမှာ ကြောက်တယ်ဆိုတော့ မြန်မာ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က လက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ရင် ရယ်စရာကြီးပါ။
အဝတ်လျှော်စက်မှာ ထမီထည့်မလျှော်ရဘူးတို့ ၊ ဓမ္မတာ လာနေချိန်မှာ အတူမအိပ်ရဘူးတို့ ၊ ထမီ နဲ့ မထိရဘူးတို့ စသဖြင့် အယူသည်းမှုတွေဟာ ရိုးရာ လား ဘာသာရေး လားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်နိင်စွမ်း မရှိခဲ့တာ အတော်ကိုကြာနေခဲ့ပါပြီ ။ အမြစ်တွယ်သလို တွယ်နေတဲ့ လူ့စံနှုန်းအဟောင်း တွေဟာ ခေတ်နဲ့အတူ လိုက်ပါပြောင်းလဲသင့်နေပါပြီ။ အဲ့တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ DIVINE POWER ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင်တော့ မိခင် ဖြစ်ခွင့်ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရား အပါအဝင် ကြီးမြတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ အားလုံး လေဥ ကနေမမွေးပါဘူး လို့ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ သုံးတောင် ဝတ် ထမီ အောက်ဝင်ရင် ၊ ထိရင် ဘုန်းနိမ့်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုတော့ ဘုန်းလက်ရုံးကြီးလှပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိုးတောင်ဝတ် ယောင်္ကျား တွေထက် စွမ်းနေတာပါလားလို့ မှတ်ချက်ပြုမိပါတယ်။
[02/07/21] “ ဉက္ကောဋေယျ “
Cotton Candy တွေ
ရေနှင့် ထိတွေ့တဲ့ အခါ
Deep throat နှင့်
ကျမ ဘဝ မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး
ကလေးမွေး မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာပါ။
[12/13/20] ချစ်တယ်လား ?
ကလေးနှင့် ပွဲတက် လင် ရဖို့တော့
ချစ်တယ် လာ မပြောပါနှင့်။
“တနေ့ ဒီလိုပဲ ထလာလိုက်တယ်”
ငြီးသံ သဲ့သဲ့ နှင့်
အီမို မ မဟုတ် တော့ပါ။
အနှစ် (၂၀) စာ အလွမ်းတွေကို
ကလွဲလို့ ၊ မနက်အသစ်
လူ အသစ် ၊ အားလုံး အသစ်။
[08/30/20] မနက်ဖြန် ၊ အသစ် ။
သုံးလွန်း တင်တင် မတင်တင်
တွေ နှင့် သူဟာ
ကျမ ရဲ့ ကမ္ဘာကို
သကြား ၊ နို့ဆီ
ကျမ က ရှင့်ရဲ့
ခေါင်းစဉ်တွေကို ကိုယ် ကြိုက်သလိုတပ်ပြီး ဖတ်ပါ။
(စာဖတ်သူတွေလဲ ဘယ်ခေါင်းစဉ်ကြိုက်လဲဆိုတာကို comment ပေးပါဦး)
၁ (ကမ္ဘာလေးထပ် ပုစ္ဆာ)
၂ (လေးယောက် တယောက်)
၃ (၁/၄ + ၁/၄ + ၁/၄ + ၁/၄ x ၁/၁)
ကမ္ဘာ လေးထပ် မှာ
သူတို့ လေးယောက် နှင့်
ကျမ ဆုံခဲ့ရတယ် ။
စိုရွှဲ၊ ရှတ၊ နာကြင် ပြီးနောက်
ကျမ တဖြုတ်ဖြုတ် နှင့်
ကဗျာ အသစ် လာပါပြီ ။ #စျာန်မိုးသူ
[07/18/20] ရှင်လိုက်မလာပါနှင့် ၊ ကျမ ခဏ ထွက်သွားပါ့
မယ် ။ ရှင် ပျော်ပါးရအောင် ကျမ ကိုယ်စား
တချိန်အားလုံးတူတူပျော်ပါးအောင်သူတို့လေးတွေကို ကျမ သင်ခဲ့ပေးမယ် ၊ ရှင့် Butterfly De******at အကြောင်း ။
/ကျမ နှင့်သူ၏ မကြင်နာခြင်းများ
သူ့ရဲ့ အချစ်ကို ကျမ နားလည်ဖို့
🔊 Myo Kyawt Myaing
“တရက် ဆေးလိပ် (၁၅) လိပ်
[07/14/20] Time is not linear ... so I have never left and you are still making love with me as I am still breathing down onamountain of curls and smooching over your curves, we are still in the lime light . While our lips are engage , our serpentine tongues are still sharing the wetness of each other . The essence of your sweat & scent still favor my demeanor over your tights .
Yes , I amagod and I have , has been & will alway be .
Yes , Time isanon-leaner construct . Tears sweat over the butterfly deep throat while I construct , the whole world burns at the desire of your embrace I found it to unleash my escape.
ရှင့် ကို ကျမ မယူ ခိုင်းပါဘူး ၊ အဖမ်းလည်းမခံခိုင်းပါဘူး ဒါကြောင့် မသေလိုက်ပါနဲ့ ၊ ကျမ ချစ်ပါရစေ။
[07/11/20] ... .. .
[07/10/20] “ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာ Portal
သူ များ သွားတေ့ာမလား”
ဈာန်မိုးသူ @ Zen Moe Thu isaMyanmar Writer / Visual Enthusiastic in Yangon. Occasionally writes Poems & Essays but currently, developingapsychotic fiction novel.
Featured in Mockingjay / EU independent online media
Solo Exhibition Sponsored by Singha / Bangkok
Bangkok บริการถ่ายภาพอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Design Photo Display Cover
Freelance Photographer :: Graduate Day / Wedding Caremony / Prewedding / Event / Concert Call me Te
PHOTOGRAPHER BASED IN BANGKOK EVENT / WEDDING / PRE-WEDDING / GRADUATION / PACKSHOT / INTERIOR
รับถ่ายภาพนะคร้าบ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0634153562 // แต๊กก คร้าบ
เลขที่ 1879-1881 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
Camera Maker ตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์ถ่ายภาพชั้นนำ พร้อมจัดจำหน่าย
บริการโปรดักชั่นทุกประเภท รับตัดต่องานวิดีโอทุกรูปแบบ มีกล้องรวมทั้งอุปกรณ์ให้เช่า
ให้เช่าสตูดิโอ ฉากขาวผนังโค้ง3ด้าน หน้ากว้าง6 ลึก 11 สูง3 เมตรในห้องเดียวกัน ยังมีผนังเทา กว้
Page ช่างภาพ รับงานถ่ายปริญญา งานแฟชั่น งาน Wedding และงานทั่วไป อีกมามาย Line : Fewblaxkpen tel: 088-2932538
93 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี
สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ วีดีโอ สินค้า สัตว์เลี้ยง
EDU Photo and Creative Media Club
Photo and Creative Media